Nyaya yekubatana - Dongguan Taiyang Textile Chemicals Co, Ltd.
Weiqiao Boka Rokupayona yasvika pakubatana nesu
Weiqiao Pioneering yasvika pakubatana nesu uye yakaraira batch yezvigadzirwa mukambani yedu kuti iwane mubatanidzwa wakanaka uye uwane vatengi kugutsikana. Shandong weiqiao mapiyona group co., Ltd. inowanikwa mune zouping County, shandong mudunhu, iri munzvimbo shandong taiyi gomo nzvimbo uye yenzou nzizi bani rechamhembe shandong overliling zone, yeindasitiri dhorobha kumabvazuva kweZibo, Kumadokero kune jinan. , guta guru renyika. maodzanyemba eJiaoji njanji, kuchamhembe kweRwizi rweYellow, makumi maviri neshanu makiromita akafamba munzira yakakura kudunhu, makumi matanhatu nemakiromita kubva kunhandare yendege yenyika ye jinan, mukana, nzvimbo yepamusoro. Weiqiao boka rakakura-rakakura rakazara bhizinesi boka rinowanzoita muindasitiri yezvokupfeka, riine gumi nevaviri uye 1 yakabatana-stock kambani. Mabhizinesi ayo makuru ari kutenderera uye kusuka, kudhinda uye kudhaya, kutengesa nekutengesa zvipfeko, kutengesa kunze uye kunze kwenyika, nezvimwewo.
Beijiang Textile yasvika pakubatana nesu
Beijiang Textile yasvika pakubatana nesu, Sezvo kambani inonyatso kutonga mhando dzayo zvigadzirwa, Taiyang Textle Auxliaries yakawana imwe zita nemukurumbira muIndasitiri, uye yakawana rumbidzo kubva kune vashandisi mumatunhu mazhinji epamusha uye zvikamu zvenyika. , Bejiang Textile inowanikwa mumusoro weShaoguan City, Guangdong Province. Iyo Shaoguan fekitori inovhara ma ares makumi matatu nemakumi mairi uye iyo vietnam fekitori inofukidza nzvimbo mazana ma 200 mahekita, Iyo Vietnam fekitori parizvino ine 480 seti yeiyo ITEMA yechizvarwa chekare R9500 denim denim rapier looms. Izvo zvigadzirwa zvemakambani zvigadzirwa manical zvinosanganisira denim machira, machira akarukwa-akarukwa, machira akadhayiwa, uye mana akateedzera nguo zvichienderana neese iripo machira. Kusvika 2013, kutengesa kwakakwana kwakaita makumi mashanu makumi mashanu ekutengesa kwemukati uye kutumira kunze kwenyika.
Guangdong Dahongma Industrial Co, Ltd.reached mushandirapamwe nesu
Guangdong Dahongma Industrial Co, Ltd. yasvika pakubatana nesu. Sezvo kambani inodzora zvakanyanya zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, Taiyang Textile Auxiliaries yakawana imwe zita nemukurumbira muindastiri, uye yakakunda kushomeka kwevashandisi mumazhinji emaprovince epamba uye zvikamu zvepasi. Kurumbidza. Guangdong Dahongma Industrial Co, Ltd. Yakavambwa muna 1984, Iyo kambani inotarisana nesainzi uye tekinoroji yekudyara, kuiswa kwemidziyo, hunyanzvi hwehunyanzvi, kudzidziswa kwevashandi, uye maneja wakasimba. Yakatangisa United States yemazuva ano kompiyuta yekuongorora uye yekufananidza ruvara, iyo yakazara michina yekuongorora dhizaini, microcomputer centralized kudhiza muchina, Taiwan kudhiza otomatiki dhirowa feeder, inorema zvigadzirwa, Italy yakakwirira-frequency pakaoma, Swiss chaiyo yakawaridza mhepo, muchina wekutumira mameseji zvishandiso, kugadzirwa-kumira. Zvigadzirwa zvepamusoro-zvemhando yepamusoro zvigadzirwa, zvinotengeswa kunze kwemadhezi, zvakatemerwa hunhu, kutonga kwemazuva ano, hunyanzvi mukugadzira, kudaya yarn, silika, mutsara wemakambani eindasitiri anoshanda.
Zhongshan Yida Apparel Limited yakasvika pakubatana nesu
Zhongshan Yida yasvika pakubatana nesu. Zhongshan Yida Apparel Limited yakakura hong Kong-yakadyarwa denim nguo inogadzira pasi peCrystal Group, iyo yakavambwa munaDecember 2003, ihwo huwandu hwekudyara hunenge HK madhora mazana mashanu emamirioni nenzvimbo inoda kusvika mamirimita mazana matatu emamirimita , yakangwara kuvaka hofisi, uye yakashongedzerwa vashandi dhoriyamu kuvaka. Iyo nzvimbo yegirinhi yakasvibira inosvika makumi matatu muzana yenzvimbo yese, uye inozivikanwa seyegadheni-dhizaini fekitori.
Iyo kambani iri muShunjing Industrial Park, Banfu Town, Zhongshan City, Guangdong Province, padhuze neNational Highway 105. Kuvimba nenzvimbo yepamusoro yenzvimbo yeZhongshan City, iyo kambani inofarira kufambisa yakanakira uye yakanaka fenicha nharaunda, ichiita nzvimbo yakanaka shanda uye urarame. Parizvino, kune zviuru zvevashandi, uye kukosha kwegore negore kunopfuura bhiriyoni imwe yuan. Zvigadzirwa zvavo zvinonyanya kutumirwa kunze kwenyika, uye vatengi vavo vari kuzere nyika. Iyo Kambani inogara ichiteedzera kune "girini kugadzira, kutsvaga kwehunyanzvi nekusimudzira mugwagwa, uye, nesimba rakasimba resainzi nekusimba kwekubatanidza kwekugadzira, kutengesa nekutsvagisa ndeye jeans nyanzvi dzekugadzira mabhizinesi, kwemakore mazhinji neChina kutumira kune United States machira ekotoni rudzi rwekunze chikamu kune imwe nyika, China ndeimwe yemabhizimusi ekunze emombe anopinza kunze mabhizimusi.
Texhong Textile Group Limited yakasvika pakubatana nesu
Texhong Textile Group Limited yasvika pakubatana nesu. Texhong Textile Group Limited (HK 2678) yakavambwa muna 1997 na Mr. Hong Tianzhu.
Iri Boka rinonyanya kuita mukugadzira nekuparadzira yarn yemhando, machira grey uye machira emachira, kunyanya yeakakwira yepamusoro-akawedzera mucheka-spun yendi uye machira emachira ekotoni. Iye zvino ndiyo imwe yemakuru machira epamba machira anotengesa munyika uye iri kutungamira bhizinesi rembatya rinotarisana nekugadzira yakakwira yepamusoro-yakawedzera yakakosha-spun machira emachira. Kubva 1997, Boka rakakura nekukurumidza uye riine vatengi vanopfuura zviuru zvitatu muChina nekune dzimwe nyika, neine network yekutengesa inotenderera ichipfuura nePRC, Europe, South Korea, HongKong uye Bangladesh. Iine musoro wayo wekutengesa yakagadzwa muShanghai, Boka iri riri kuita zvirimwa gumi nemaviri zvinogadzirwa muChina (mukati meYangze River Delta) uye ine denderedzwa rekugadzira muVietnam ine huwandu hwekugadzira hunowedzera kupfuura 2,160,000 spindles uye 572 air-jet looms. Iine tsika yekudyidzana ye "Kubatana, Kubatana, Kubudirira, Kunakisa", Boka raisa chirongwa chayo chebudiriro sehunyanzvi, kusendama pamwe nekudyidzana nedzimwe nyika. Ichiri kutsunga kuve China ine simba uye inotungamira bhizimusi rezvipfeko, Boka rakazvipira kuwedzera kukosha kune iro rinogovana, vatengi uye kupa mupiro kunharaunda.